ViduPM: Sehatra fitantanana sy tatitra momba ny tetikasa SEO an-tserasera | Martech Zone
Zoma, Aogositra 3, 2018 Asabotsy, Aogositra 4, 2018 Douglas Karr
Na dia maro aza ireo masoivohon'ny varotra nomerika manokana momba ny fanatsarana ny motera fikarohana ary misy izany fitaovana tsy tambo isaina eny an-tsena ho an'ny SEO, matetika izy ireo dia mifantoka amin'ny fametrahana taktika ny SEO fa tsy ny tena fitantanana ny mpanjifa. ViduPM namboarina manokana ho an'ireo masoivoho mifantoka amin'ny SEO hitantana, hiara-miasa, hanao tatitra ary hanome faktiora ny mpanjifanao SEO aza.
Ny endri-javatra ViduPM dia misy:
SEO Project Management - Tetikasa ilaina ho an'ny fitantanana ekipa mahomby ny fitantanana tetikasa.
Fitantanana SEO - ViduPM dia nanatanteraka ny fangatahana masoivoho nomerika ho an'ny fandrindrana ny mpanjifa.
Fitantanana faktiora - ViduPM dia manana fitaovana hanarahana sy hitantanana ny faktioran'ny tranonkala sy hanome fifandraisana tsara kokoa.
Tatitra afovoany - tatitra momba ny fanatsarana motera namboarina ho azy.
Time Management - Araho ny fotoana laninao sy ny ekipanao amin'ny tetik'asa rehetra miaraka amin'ny endri-javatra fizahana fotoana ViduPM.
File Management - ViduPM dia manampy anao hitazona ny rakitrao rehetra voalamina sy havaozina hatrany.
Communications - mijanona amin'ny pejy iray ihany miaraka amin'ny fitaovam-pifandraisana ekipa mora.
Fampidirana ny antoko faha-3 - ViduPM dia manana zavatra betsaka atolotra amin'ny resaka fampidirana antoko faha-3 koa.
Jereo ny lisitr'ireo ny fiasa rehetra amin'ny tranokalan'ny ViduPM.
Tags: masoivoho marketing digitalfitantanana tetikasa dizitalyfaktiorafaktiorafilaharana teny lakilefitantanana tetik'asalaharanaSEOseo masoivohoseo sehatraseo fitantanana tetikasafitaovana seovidupm
Statistika 10 Pinterest Tokony ho Fantatry ny Mpivarotra rehetra